Waa kuma Maxamed Cali - ninka laf dhuun gashay ku noqday Madaxweynaha Masar? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWaa kuma Maxamed Cali – ninka laf dhuun gashay ku noqday Madaxweynaha Masar?
Maalmihii la soo dhaafay waxaa Magaalooyin badan oo ku yaalla dalka Masar oo ay kamid yihiin Qaahira iyo Alexnadria ka socday dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Madaxweyne Cabdul-Fataax Al-Sisi.
Saameynta Maxamed Cali
Qaar kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Masar ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta dibadbaxayadaas iyo saameynta ay ku yeelan karto noolasha dadka caadiga ah.
Waxay shegeen in marka la eego qaabka ay wax uga falceliyaan laamaha ammaanka ay arrintaas dhibaato ka dhalan karta, iyagoona ugu baaqay ciidanka in aysan la xifaaltamin dadka dibadbaxaya, balse ay ilaaliyaan.
Sidoo kale waxay dalbadeen in la sii daayo dhamaan maxaabiista u xiran arrimo siyaasadeed iyo ciidanka loo xiray in ay ka soo horjesteen siyaasadaha Madaxweyne Sisi.
Maxamed ayaa baraha bulshada ee dalkaas caan ka noqday, oo waxaa maalmahan baa ad u hadal hayay warbaahinta Carabta, kuwaas oo qaar kamid ah ay ku tilmaameen “hormuudka kacaanka cusub ee Masar.
Maxamed waxaa kale oo uu sheegay in aanan la siinin lacagtii ay ku ballameen dowladda, gaar ahaan milateriga oo uu sheegay in shaqooyin badan uu u qabtay.
Dad badan ayaa aad ugu taxan akoonada uu 45 jirkan ku leeyahay baraha bulshada, oo waxay marwalba daawadaan muuqalada uu soo dhigo baraha bulshada ee uu kaga hadlo taliska Madaxweyne Sisi iyo xaaladda dalka Masar.
Muuqaaladii uu soo dhigay ee uu kaga hadlay “musuqmaasuq ka jira dalka Masar” ayaa wxaay dhalisay in ay soo xoogeystaan eedeemaha loo jeedinayo Madaxweynaha iyo hadal heynta dibadbaxyada.
Inkastoo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaa dibadbaxayada looga soo horjeedo Dowladda Masar iyo saameynta kale ee uu la soo bixi doona Maxamed Cali ayaa hadana maksaxda shacabka dalkaas waxaa wali ka guuxay dibadbaxyadii horay uga dhacay Masar iyo saameyntii ka dhalatay.
Hadaladii uu jeediyay Maxamed Cali ayaa waxay keentay in dowladda ay ciidamo soo dhoobto wadooyinka Magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar, gaar ahaan fagaaraha Taxriir ee Magaalada Qaahira, halkaas oo xudun u ahayd dibadbaxyadii sababay isbadelkii ka dhacay Masar sideed sano kahor.
Dadka qaar ayaa aaminsan in shacabka Masaarida aysan ahayn sidii hore oo ay ka daaleen dibadbax, Maxamed Cali ayaa se wali ku baaqay in dadku ay isu soo baxaan oo meesha laga tuuro dowladda hadda jirta.
Ciidanka Masar ayaa sidii looga bartay ba aanan gacan bir ah kala hortagin dadkii dibadbaxayay maalmahan, waxaa se dadka darsa arrimaha Masar ay aaminsan yihiin in haddii dibadbaxayad ay sii ballaartan ay u badan tahay in milateriga ay gacan bir ah kala hortagi doonaan dadka.
Madaxweynaha Masar, Cabdul-Fataax Al Sisi oo ka qeybgalayay shirka dhalinyarada ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay maamulkiisa, isagoona ku tilmaamay kuwa meel ka dhac ah.
Mamnuucista Akhwaanul Muslimiin
Dadka taageera siyaasdaaha Madaxweynaha Masar ayaa mar wlaba ku dooda in uu dib u habeyn ku sameeyay dhaqaalaha Masar, waxbadan na uu ka qabtay dhaqalaah sii liicayay ee dalkaas.
Hasayeeshee daraasadd la soo saaray bishii Luulyo ee sanadkan ayaa lagu sheegay in qof kamid ah saddexdii qof ee Masar ay ku nool yihiin saboolnimo. Shacabka dalkaas ayaa gaaray boqol milyan oo ruux.
Maamulka Madaxweyne Cabdul-Fataax Al Sisi ee dalka Masar ayaa wadankaas horay uga mamnuucay ururka Akhwaanul Muslimiin oo uu ka tirsanaa Madaxweynihii ugu horeeyay ee si dumuqradai ah looga soo dorto Masar.
Maxamed Mursi ayaa waxaa xilka ka tuuray isla Sisi oo uu xiligaas ahaa wasiirkii gaashaandhiga, waxaana intii ka damabeesay dalkaas lagu xirxiray dad badan oo ka afkaar duwan milateriga, kuwaa oo qaar badan oo kamid ah la xukumay, halka kuwa kalena ay u baxsadeen dalka dibadiisa.